Vietnam:DELEGASIONA 250 -
Hohatsaraina ny fifandraisan’i Madagasikara sy Vietnama. Tamin’ny alalan’ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa, teo amin’ny firenena roa tonta, natao omaly teny Iavoloha no nanamarihana izany. Voasonia tamin’izany koa ny fiarovana ny famatsiam-bary eo amin’ny roa tonta.
Firenena mpamokatra vary eran-tany i Vietnam ary tsara toerana indrindra izy raha hanampy antsika. Ny vary dia mbola foto-tsakafon’ny Malagasy ary zava-dehibe ho an’ny fampandrosoana ny fifehezana io sehatra io sy ny fahazoana fifanaraham-piaraha-miasa tahaka izao. Omaly tamin’ny 7 ora maraina no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina Vietnam Airlines nitondra ny filoha Train Dan Quang. Hanatrika Frankofonia, izay misy ny fivoriamben’ny filoham-pirenena anio izy ireo. Delegasiona vietnamianina 250 no eto an-toerana ka ny 50 tamin’ireo efa nialoha lalana. Ny 40 amin’ireo kosa dia mpandraharaha avokoa ary vonona hanao fifanaraham-piaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha malagasy. Ity firenena aziatika ity dia nampiseho ny fahavononany hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy hanatrika Frankofonia ihany akory no anton-diany fa hitondra izay anjara biriky azony entina. Porofon’izany izao fifanaraham-piaraha-miasa nosoniavina avy hatrany teo amin’ny firenena roa tonta raha vantany vao tonga teto Madagasikara izy ireo (fiaraha-miasa fanatsarana ny fambolena sy ny voka-bary). Tsy azo lavina koa fa tombontsoa mivantana azon’i Madagasikara amin’ny fandraisana Frankofonia avokoa izany.
Teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha no noraisin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ireto delegasiona vietnamianina ireto. Nisy tamin’izany ny fanasana ny minisitry ny Fambolena Rivo Rakotovao ho avy any Vietnam hijery izay hanamafisana an’izay fifanaraham-piaraha-miasa izay. Efa manana masoivoho eto amintsika ny Vietnamianina. Etsy Anosivavaka Ambohimanarina no foibeny, izay vao notokanana ny alakamisy teo.